Chiremera Chekuvaka Kwekutsvaga | Martech Zone
Chiremera Chekuvaka chekutsvaga
Mugovera, Mbudzi 19, 2011 Svondo, November 20, 2011 Douglas Karr
Ndave ndiri mutsigiri wenguva refu Search Engine Optimization kwenguva yakati rebei, asi zvangu zvakaitika ichangopfuura naMartech vakatendeseka kudzora mufaro wangu. Ini ndanga ndichifunga kuti SEO ndiyo yaive nzira yakanaka yekukura traffic nekuti yaive chinhu iwe chaunogona kudzora. Izvo ichokwadi kusvika padanho, asi zvinongogona kukuendesa iwe kusvika padanho reruzhinji rwekutsvaga kwenyaya yakapihwa. Ndakaona kuti kana tangosvika pazvigaro zvepamusoro soro, mhedzisiro yacho yaiwanzo kuve inosemesa. Ndarasikirwa nekutenda muhuwandu hwekutsvagisa hweGoogle uye ndarasikirwa nekutenda mukuedza kunodiwa kuti uwane chinzvimbo chiri nani.
Izvi zvinoreva here kuti ndasiya SEO? Kwete. Nhanho yekutanga yandinotora nevatengi vese ndeyekuona kuti zvirimo zvirimo yakavakwa papuratifomu yakagadziridzwa, kuti madingindira avo akamisikidzwa nemazvo, uye ivo vanoziva iwo makiyi uye makwikwi. Izvo zvandakaita zvakatorwa chero chekuwedzera basa uye ndokuzvimanikidza kukwidziridzwa pane kugadzirisa. Ini handisi kutaura kumashure-kubatanidza… izvo zviri chokwadi kurasikirwa kurasikirwa nehunyanzvi muindasitiri. Ndiri kutaura nezve kusimudzira kwezvakanaka zvemukati - uine kana pasina chinongedzo - kuburikidza nemidhiya uye nzanga nzira.
Kambani inogona kuisa mazana e backlinks gore rese uye ichiri isingaite kune chinzvimbo chinotyaira chero chakakodzera traffic. Nekudaro, kana kambani ikashandisa chiyero chakaenzana pakunyora zvisingaite zvemukati, kusimudzira nekukanda izvo zvirimo, tiri kuona kuwedzera kunoshamisa muhuwandu hwevashanyi vanokodzera… uye zvinotevera mitengo yekutendeuka zvakare. Chirevo chakadzama kubva kwandiri ichi ... ndinofunga search engine optimization yatove indasitiri inofa. Kana pasina chimwe chinhu, mazuva ayo akaverengwa.
Iyi infographic kubva Vertical Matanho inotaura kune nhanho dzinotora mafemu kuvaka chiremera chemasaiti. Ini ndinokukurudzira iwe kuti ufuratire iyo yekutsvaga injini chikamu uye kungo shanda pakuvaka yakakura zvemukati uye nekuisimudzira iyo kuburikidza nematanho avanotsanangurira kuvaka chiremera… Yedu pasina kutsvaga!
Internet Kushambadzira Infographic by Vertical Matanho.
Tags: simbachiremera chekuvakaSearch Engine Optimizationkutsvaka optimizationseo
Mbudzi 19, 2011 na8: 46 PM
Ini ndinogara ndichishamiswa nemamwe makuru masayiti ini andinosangana nawo asingagare blog pavari.
Kunyanya kumabhizimusi madiki nepakati, Blogs ndiwo hupenyu.
Ngatitarisirei kuti vadzidze!
Mbudzi 20, 2011 na2: 17 PM
Ini ndangobva kuverenga kuti isingasvike makumi matatu muzana yemakambani chaizvo ane blog (ndinofunga inogona kunge iri shoma). Kune rimwe divi rechikero, ingangoita 30 muzana yemakambani Fortune ane blog. Zvakadaro matani emakamuri emakambani anokwanisa kunyora zvemukati makuru kuti anyatso kuita mutsauko mune yavo yepasi mutsara.
Nov 22, 2011 pa12: 48AM
Ini ndaigara ndichinyora zvemukati zvebhizimusi social network Iyo tech timu yaida zvimwe SEO, mamwe mazwi akakosha (aiwa, yanga ichangoitika, asi ini ndoziva nei uchifunga izvozvo), zvimwe kunze kwechinguva kuyedza kupusa injini dzekutsvaga.
Zano rangu raive rekuwedzera nyowani zvemukati 2-4 nguva pasvondo, kunyangwe aive mazwi mazana matatu kana mazana matatu mazwi aive asina basa - zvese zvaikosha ndezvekuti zvakaziviswa, zvakakosha, uye kuita. Zano rangu raive rekuisa zvinhu kunze uko izvo vanhu vaizoda kugovana.
Chinhu chinosuruvarisa ndechekuti isu tanga tichishandisa CMS yevaridzi, saka tanga tisina bhurogu, chero shanduko yeCMS yandaida yaive nyaya yekusimudzira, uye saiti iyi yakanetseka kuwana chero traction.
Tsvaga Injini Kugonesa = Zvakanaka
Masangano Akabatana Nesangano = Zvirinani
Ini handishamiswe kuti makambani mazhinji haana mablog - avo tech vanhu vachiri kurarama vachitsvaga nekunyengedza Google, pavanofanirwa kunge vachitarisa munharaunda senzira yekudyidzana nevatengi vavo nevatengi.
Nov 22, 2011 pa1: 51AM
Zvide! Zvemagariro Ekubatanidzwa Masangano> Tsvaga Injini Kugonesa